Ndị ụlọ ọrụ chọrọ akwụkwọ a na tebụl kọfị ha Martech Zone
Ndị ụlọ ọrụ chọrọ akwụkwọ a na tebụl kọfị ha
Ọtụtụ afọ gara aga, agara m onye isi m, ihe m chere, bụ echiche dị ịtụnanya iji bulie mgbasa ozi nke ọpụrụiche. Mee ngwa ntanetị ebe onye debanyere aha nwere ike ịchọta ụlọ ha ma kpaa ụbọchị ị gara ebe a na-ere ụgbọala. N'etiti, ndị mgbasa ozi nwere ike itinye coupon ma ọ bụ abụọ maka nri ehihie ma ọ bụ kọfị.
Routezọ a na-ezube ga-eme ka ụgbọala ahụ na-ere ụgbọ ala ka ọ nwekwuo oge na-egbu oge na obere oge ịkwọ ụgbọala Ikekwe ha nwere ike iyo site isiokwu, anya, oge, wdg. Onye isi m chere na echiche ahụ bara uru ma m wee nweta ụfọdụ ruturu (n'okpuru $ 10k n'oge ahụ).
Ajụ ya n'ihi ego.
Ọ bụ Echiche Gburu ma ọ na-ewute m maka afọ 5 ma ọ bụ 6 ọ na-agbagha n'isi m. Daybọchị ọ ga - ewu, aga m akwa ákwá n’amara na m gaara abụ akụkụ nke ihe pụrụ iche (yana ọtụtụ ngwa ndị ọzọ bara uru). Taa, m na-eze ume obere ume nke enyemaka ka emesịrị ede ya n'akwụkwọ ọhụrụ…
Enwetara m akwụkwọ siri ike (ejiri ya Ihe omuma) taa na mail ma ọ dị ezigbo mma. Nka ihe di na etu akwukwo a puru, ihe edeputara nke a, na echiche ndi di n’ime ya mere ya bu otu n’ime akwukwo akuko kachasi nma m ga etinye n’elu tebụl kọfị. Agencylọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ịnwe otu!
Ndị ọrụ gọọmentị pịa ntọhapụ na Echiche Gburu si izu a na ịtụ vootu na-aga! M ga-enwe ekele maka gị votu maka Garage Sale Mapper! Ọ bụ nnukwu nsọpụrụ ịhọrọ m na echiche 50 ikpeazụ maka akwụkwọ - Anọ m na ụlọ ọrụ nke ụfọdụ ikike okike dị ịtụnanya.
Ihe Nzuzo nke SEM: Achọpụtala nsonaazụ Google
M nwere votu gị Garage Sale Mapper… kwa na!
Woohoo! Daalụ maka votu ahụ!